कोटा र आरक्षणमा नै रमाउने बानी परिसक्यो - Damak No.1 Online Patrika
प्रकाशित मिति : बुधबार, मंसिर २६, २०७५
महिलाका लागि सुरक्षीत समाजको परिकल्पना गर्ने हो भने शबैभन्दा पहिला महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण ,गर्ने व्यवहार र उनिहरुको अधिकारको पक्षमा परिवर्तन आउन निकै जरुरि छ । वर्तमान महिलाको अवस्था धरै राम्रो छ र आजको दिनमा महिला निकै सवल र सक्षम बनिसकेका छन् भनिएता पनि समाजका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन भन्दा खासै फरक नपर्ला । समाजमा महिलाको अवस्थामा परिवर्तन नआउन्जेल देश विकासको सपना कदापी पुरा हुन सक्दैन । समाजका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सकृय सहभागिता नहुनुमा केहि हदसम्म महिलाका कमिकमजोरि पनि पक्कै छन् ।
महिला भएर सँधै महिलाकै पक्षमा मात्र वकालत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । कहिलेकाहिँ हाफूले गरेको कामको समीक्षा नगर्नु, आफ्नो कमीकमजोरिलाई नियालेर सुधार्ने प्रयास नगर्नु र आफ्नो क्षमाता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान नदिनाले पनि कार्यक्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्थाको सृजना हुन्छ । चाहे महिला होस या पुरुष कुनै पनि क्षेत्रका अब्बल भएर अगाडि आउनका निमित्त कार्यक्षेत्रमा सहयोगि वातावरण हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यदि कार्यक्षेत्रमा असहयोगि वातावरण हावि भएको छ भने काम गर्ने जो कसैको पनि क्षमतामा प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्छ । आज महिलाहरुले निर्णायक तहमा उचित सहभागिता जनाइसकेकाछन् तर पनि कीन महिलाहरुको स्वविवेकीय मौलीक क्षमताको प्रभाव झल्कन सकीरहेको छैन ? यो प्रश्नको उत्तर कस्ले दिने ।
आज हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता मात्र बढाउने होडबाजीमा कोटा, आरक्षण र समाबेशिताको नाम खडा गरेर महिला उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । यसरि भिख दिएझैँ गरि कोटा र आरक्षणको भरमा महिलालाई अघि उभ्याइदिदा कहिलेकाहिँ योग्यता र क्षमताको खिल्लि उडाएझैँ लाग्छ । कसैले भनेका छन् महिला भएर पुरुषजस्तो बनीन खोज्नु महिलाको मुर्खता हो! पक्कै पनि । महिला पुरुष बराबरि भन्दै जतीसुकै चर्को नाराबाजी गरे पनि यथार्थ यहि हो की महिला पुरुष कहिल्यै पनि बराबरि हुन सक्दैनन् । जब प्रकृतिलेनै महिला र पुरुष बेग्ला–बेग्लै हुन् भनेर छुट्याइदिएको छ भने हामी कसरि बराबरि हुन सक्छौ? तर हामिले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने जब योग्यता र क्षमताको कुरा आउँछ यहाँ महिला र पुरुष भन्ने कुराको कुनै औचीत्य हुँदैन । योग्यता र क्षमता भनेको नितान्त व्यक्ति विशेषमा भर पर्ने कुरा हो ।
बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्न नसक्दा पनि केहि हदसम्म महिला पछि परेको छर्लङ्ग देख्न सकीन्छ । सधैँ भासण गर्दा हामी कमजोर छैनौ भन्ने तर काम सम्पादन गर्ने बखत चाहीँ महिला भएकै कारण आफूलाई अनुकुल वातारण बनाइदिन माग गर्ने प्रवृति महिला नेतृहरुमा बढी हावि भएको स्पस्ट देख्न सकीन्छ । आजको दिनमा पनि महिला हक अधिकारको विषयमा छलफल र बहस गर्नका लागि कुनै विषेश दिन अथवा कुनै दिवश नै पर्खनुपर्छ ।
वर्षमा एक दिन कुनै एउटा दिवशको अवसर पारेर केबल शहर–बजारका शिक्षित महिलाहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न हुने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चितता गर्न के कस्तो टेवा पुर्याइरहेको छ त ? यहाँ पनि प्रश्न छ के अझै पनि महिलाको विषयमा बहस गर्न दिवसनै पर्खीरहनुपर्छ ? अन्यथा हैन भने बाँकी दिनमा कीन महिलाको हक अधिकार, हरेक क्षेत्रमा महिलले भोग्नुपरेका समस्या र महिला मुद्याको कुरामाथि छलफल र बहस हुन सकीरहेको छैन? यहिँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ आजको दीनमा हाम्रो समाजमा महिलाको अस्तित्व । खैर अब त हामिलाई कोटा र आरक्षणमा नै रमाउने बानी परिसक्यो ।